Asomafo Nnwuma 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Asomafo Nnwuma 7:1-60
Stefano kasae wɔ Sanhedrin no anim (1-53)
Agyanom bere so (2-16)
Mose dii wɔn anim; Israelfo som abosom (17-43)
Onyankopɔn nte asɔrefi a nnipa de wɔn nsa asi mu (44-50)
Wosiw Stefano abo (54-60)
7 Na ɔsɔfo panyin no bisaa no sɛ: “Nsɛm yi te saa anaa?” 2 Ɛnna Stefano buae sɛ: “Mmarima, anuanom ne agyanom, muntie. Anuonyam Nyankopɔn no yii ne ho adi kyerɛɛ yɛn nana Abraham, bere a na ɔwɔ Mesopotamia, ansa na ɔrekɔtena Haran,+ 3 na ɔka kyerɛɛ no sɛ: ‘Fi w’asaase so ne w’abusuafo mu na kɔ asaase a mɛkyerɛ wo no so.’+ 4 Enti ofii Kaldeafo asaase so kɔtenaa Haran. Bere a ne papa wui no,+ Onyankopɔn ma otu fii hɔ, na ɔbɛtenaa asaase a mote so seesei yi so.+ 5 Nanso wamma no bi sɛ agyapade. Daabi, wamma no baabi a ɔde ne nan besi mpo. Mmom ɔhyɛɛ bɔ sɛ ɔde bɛma no sɛ agyapade, na n’akyi no, ɔde bɛma n’asefo.*+ Nanso saa bere no, na onni ba. 6 Bio nso, Onyankopɔn ka kyerɛɛ no sɛ n’asefo* bɛkɔ akɔyɛ ahɔho wɔ obi man so, na ɛhɔfo de wɔn bɛyɛ nkoa na wɔateetee wɔn* mfe 400.+ 7 Onyankopɔn kae sɛ, ‘Mebu ɔman a ɛde wɔn bɛyɛ nkoa no atɛn,+ na eyinom akyi no, wobefi hɔ na wɔabɛsom me wɔ ha.’+ 8 “Ɔsan ne Abraham yɛɛ twetiatwa* apam.+ Enti bere a ɔwoo Isak+ no, da a ɛto so awotwe no, otwaa no twetia.+ Na Isak woo Yakob,* na Yakob woo mmusua ti* 12 no. 9 Na mmusua ti no ani beree Yosef,+ na wɔtɔn no kɔɔ Egypt.+ Nanso na Onyankopɔn ka ne ho,+ 10 na ogyee no fii ne haw nyinaa mu, na ɔma onyaa adom ne nyansa wɔ Egypt hene Farao anim. Na Farao de Egypt ne ne fi nyinaa hyɛɛ ne nsa sɛ ɔnhwɛ so.+ 11 Na ɔkɔm baa Egypt ne Kaanan nyinaa, yiw, ahokyere kɛse paa, na na yɛn agyanom nnya biribiara nni.+ 12 Ɛnna Yakob tee sɛ aduan wɔ Egypt, enti ɔsomaa yɛn agyanom kɔɔ hɔ nea edi kan.+ 13 Bere a wɔkɔɔ ne mprenu so no, Yosef yii ne ho adi kyerɛɛ ne nuanom, na Farao huu Yosef abusuafo.+ 14 Enti Yosef de nkra kɔmaa ne papa Yakob ne n’abusuafo nyinaa sɛ womfi hɔ mmra.+ Ná wɔn nyinaa dodow si nnipa* 75.+ 15 Enti Yakob kɔɔ Egypt,+ na owui wɔ hɔ.+ Na yɛn agyanom nso wuwui saa ara.+ 16 Na wɔde wɔn kɔɔ Sekem kosiee wɔn. Wosiee wɔn wɔ ɔda a Abraham de dwetɛ sika tɔ fii Hamor mma nkyɛn wɔ Sekem no mu.+ 17 “Bere a aka kakra ama ɛbɔ a Onyankopɔn hyɛɛ Abraham no aba mu no, nnipa no yɛɛ bebree, na wɔdɔɔso wɔ Egypt, 18 kosii sɛ ɔhene foforo bedii ade wɔ Egypt. Ɔno de, na onnim Yosef.+ 19 Saa ɔhene no nam nyansakwan so dii yɛn abusua no so, na ɔde atirimɔden hyɛɛ agyanom no sɛ wonnyaw wɔn mma nketewa hɔ sɛnea ɛbɛyɛ a wobewuwu.+ 20 Saa bere no na wɔwoo Mose, na na ne ho yɛ fɛ yiye.* Na wɔhwɛɛ no* wɔ ne papa fi abosome abiɛsa.+ 21 Na bere a wogyaw no too baabi no,+ Farao babea faa no, na ɔtetee no sɛ ɔno ara ne ba.+ 22 Enti wɔkyerɛɛ Mose Egyptfo nyansa nyinaa. Nokwasɛm ne sɛ, na ɔde tumi kasa, na ɔyɛɛ nneɛma akɛse.+ 23 “Bere a odii mfe 40 no, ɛbaa ne komam* sɛ ɔbɛkɔ akɔsra* ne nuanom, Israel mma no.+ 24 Bere a ohui sɛ wɔreyɛ wɔn mu baako bɔne no, ɔkɔboaa no, na okum Egyptni no tuaa ka. 25 N’adwene yɛɛ no sɛ ne nuanom no behu sɛ Onyankopɔn nam no so* regye wɔn, nanso wɔanhu no saa. 26 Bere a ade kyee no, ɔkɔtoo wɔn sɛ wɔreko, na ɔyɛe sɛ ɔbɛka wɔn abom ama asomdwoe aba wɔn ntam. Enti ɔkae sɛ: ‘Mmarima, moyɛ anuanom. Adɛn nti na moatwa mo ho reko?’ 27 Ɛnna nea ɔreyɛ ne yɔnko bɔne no piaa Mose, na ɔkae sɛ: ‘Hena na ɔde wo sii yɛn so sɛ sodifo ne ɔtemmufo? 28 Wopɛ sɛ wukum me sɛnea nnɛra wukum Egyptni no anaa?’ 29 Bere a Mose tee saa no, oguanee, na ɔkɔyɛɛ ɔhɔho wɔ Midian asaase so. Ɛhɔ na ɔwoo mma mmarima baanu.+ 30 “Mfe 40 akyi no, ɔbɔfo bi yii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ Sinai Bepɔw sare so wɔ nwura* bi a ɛredɛw mu.+ 31 Bere a Mose hui no, ɛyɛɛ no nwonwa. Na ɔrebɛn ho akɔhwɛ no, ɔtee Yehowa* nne sɛ: 32 ‘Mene w’agyanom Nyankopɔn, Abraham ne Isak ne Yakob Nyankopɔn.’+ Na ehu kaa Mose, enti wannya akokoduru bio sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ dekode. 33 Yehowa* ka kyerɛɛ no sɛ: ‘Yi wo nan ase mpaboa, na baabi a wugyina no yɛ asaase kronkron. 34 Sɛnea wɔreteetee me nkurɔfo a wɔwɔ Egypt no m’ani tua, na mate wɔn sufrɛ,+ na masian aba sɛ merebegye wɔn. Enti bra ma mensoma wo nkɔ Egypt.’ 35 Mose yi a wɔkae sɛ wonnim no, a wobisaa no sɛ: ‘Hena na ɔde wo sii yɛn so sɛ sodifo ne ɔtemmufo?’+ no, ɔno ara na Onyankopɔn nam ɔbɔfo a oyii ne ho adi kyerɛɛ no wɔ nwura* mu no so somaa no+ sɛ sodifo ne ogyefo. 36 Ɔbarima yi na oyii wɔn fii Egypt,+ na ɔyɛɛ anwonwade ne nsɛnkyerɛnne wɔ Egypt+ ne Ɛpo Kɔkɔɔ no+ mu ne sare no so mfe 40.+ 37 “Mose yi na ɔka kyerɛɛ Israel mma sɛ: ‘Onyankopɔn beyi odiyifo bi a ɔte sɛ me afi mo nuanom mu ama mo.’+ 38 Mose yi na na ɔne asafo no wɔ sare so no. Ná ɔbɔfo+ a ɔkasa kyerɛɛ+ Mose wɔ Sinai Bepɔw so, a ɔsan kasa kyerɛɛ yɛn agyanom no ne Mose na ɛwɔ hɔ. Na Mose nsa kaa nkwa nsɛm kronkron sɛ ɔmfa mmrɛ yɛn.+ 39 Yɛn agyanom antie no.+ Mmom wopiaa no too baabi, na wɔn koma san kɔɔ Egypt,+ 40 na wɔka kyerɛɛ Aaron sɛ: ‘Yɛ anyame ma yɛn ma wonni yɛn anim. Efisɛ Mose yi a odii yɛn anim fii Egypt asaase so no de, yennim nea ato no.’+ 41 Enti wɔyɛɛ nantwi ba bi wɔ saa nna no mu, na wɔbɔɔ afɔre maa ohoni no, na wofii ase gyee wɔn ani wɔ wɔn nsa ano adwuma no ho.+ 42 Enti Onyankopɔn twee ne ho fii wɔn ho, na ogyaa wɔn ma wɔsom ɔsoro asafo,+ sɛnea wɔakyerɛw wɔ Adiyifo no nhoma mu no. Wɔakyerɛw wɔ mu sɛ: ‘O Israel fi, ɛnyɛ me na mode akyɛde brɛɛ me na mobɔɔ afɔre maa me wɔ sare so mfe 40 no. 43 Mmom, mofaa Molok+ ntamadan ne mo nyame Refan nsoromma no, ahoni a moyɛɛ wɔn sɛ mobɛsom wɔn no. Ɛno nti, metwa mo asu akɔ Babilon akyi noho.’+ 44 “Bere a yɛn agyanom nam sare so no, wonyaa adanse ntamadan no. Sɛnea Onyankopɔn de akwankyerɛ maa Mose bere a ɔrekasa akyerɛ no no, ɔyɛɛ no pɛpɛɛpɛ te sɛ ɛho nhwɛso a Nyankopɔn de kyerɛɛ no no.+ 45 Yɛn agyanom nsa kaa ntamadan no, na wɔne Yosua de baa amanaman no asaase so,+ aman a Onyankopɔn pam wɔn fii yɛn agyanom anim no.+ Na ɛtenaa ha ara kosii Dawid bere so. 46 Onyankopɔn hyiraa Dawid, na Dawid srɛe sɛ wɔmma onsi tenabea mma Yakob Nyankopɔn no.+ 47 Nanso, Solomon na osii ofi maa no.+ 48 Nso nea ɛwom ne sɛ, Ɔsorosoroni no nte afi a nnipa de wɔn nsa asi mu,+ sɛnea odiyifo no kae no. Ɔkae sɛ: 49 ‘Ɔsoro yɛ m’ahengua,+ na asaase yɛ me nan ntiaso.+ Ofi bɛn na mubesi ama me? Yehowa* na ose. Anaa homebea bɛn na mode bɛma me? 50 Ɛnyɛ me ara me nsa na ayɛ nneɛma yi nyinaa?’+ 51 “Nnipa a moasen mo kɔn* a mo koma ne mo aso awu,* daa moko tia honhom kronkron no. Sɛnea mo agyanom yɛe no, saa ara na moyɛ.+ 52 Adiyifo no mu hena na mo agyanom antan n’ani?+ Yiw, wɔn a wɔkaa ɔtreneeni a ɔreba no ho asɛm too hɔ no, mo agyanom kunkum wɔn.+ Saa ɔtreneeni no na nnansa yi ara mo nso muyii no mae, na mukum no no,+ 53 mo a munyaa Mmara no sɛnea abɔfo de mae+ nanso moanni so no.” 54 Bere a wɔtee saa nsɛm no, ɛwowɔɔ wɔn komam, na wɔn bo fuw no denneennen.* 55 Nanso ɔno de, na honhom kronkron ayɛ no ma. Enti ɔhwɛɛ soro dinn, na ohuu Onyankopɔn anuonyam, na ohuu Yesu nso sɛ ogyina Onyankopɔn nsa nifa.+ 56 Ɛnna ɔkae sɛ: “Hwɛ! Mihu sɛ ɔsoro abue, na onipa Ba no+ gyina Onyankopɔn nsa nifa.”+ 57 Bere a ɔkaa saa no, wɔde nne kɛse teɛteɛɛm, na wɔde wɔn nsa sisiw wɔn aso, na wɔn nyinaa gyee bum kɔɔ no so. 58 Ɛnna wɔde no fii kurow no mu kɔɔ kurow no akyi, na wofii ase siw no abo.+ Na adansefo no+ de wɔn ntaade nguguso guu aberante bi a wɔfrɛ no Saul+ nan ase. 59 Bere a wogu so resiw Stefano abo no, ɔsrɛe sɛ: “Awurade Yesu, mede me nkwa* hyɛ wo nsa.” 60 Afei obuu nkotodwe, na ɔde nne kɛse teɛɛm sɛ: “Yehowa,* ntwe wɔn aso wɔ bɔne yi ho.”+ Bere a ɔkaa saa no, owui.*
^ Anaa “wɔadi wɔn ani.”
^ Anaa “duatwa.”
^ Ebetumi nso akyerɛ, “Isak nso yɛɛ Yakob saa ara.”
^ Anaa “tete agyanom.”
^ Anaa “ne ho yɛ fɛ wɔ Onyankopɔn anim.”
^ Anaa “wɔtetee no.”
^ Anaa “ɔyɛɛ n’adwene.”
^ Anaa “akɔhwɛ.”
^ Anaa “nam ne nsa so.”
^ Anaa “Asobrakyefo.”
^ Nt., “koma ne aso mu momonotofo.”
^ Anaa “wofii ase twɛree wɔn se guu no so.”
Asomafo Nnwuma 7